Rotary Hammer Bosch GBH 2-26 DFR Professional: imfundo, ukulungisa kanye nokubuyekeza
Uyayibumba ngezando ukuze isetshenziswe lochwepheshe nenqwaba abe ukusebenza okuhle, kodwa ulahlekelwa nozakwabo yasekhaya ngokuya Ergonomics. Lokhu inhlanganisela izimfanelo efanelekayo kubasebenzisi abaningi, kusukela ikhambi izinkinga eziyinkimbinkimbi ekwakhiweni ngokwayo kusikisela ukubuya ephakeme ku umsebenzi oqondile ithuluzi. Noma kunjalo, onjiniyela Bosch sinqume ukuba bamuke kulowo ojwayelekile kanye umfuziselo ukuthi ihlanganisa izinzuzo kokubili izigaba - okungukuthi, ukuhlanganisa lula ukusetshenziswa kanye umthamo high. I yemizamo abaklami German waqala hammer Bosch GBH 2-26 DFR Professional, okuyinto ingasetshenziswa anhlobonhlobo ukwakhiwa kanye ukufakwa imisebenzi. Imodeli has cishe akukho izimbangi ekilasini yayo, okwenza kube nentuthuko esiyingqayizivele.
Isakhiwo eziyisisekelo insimbi oluhlanganisa iqoqo esezingeni izingxenye, kuhlanganise: izakhi yokusebenza, izindlela zokuphepha, anhlobonhlobo cartridges, isibambo ergonomic, izibopho kanye uyama, ethwala amasongo uvala. Ngokuphathelene ukubulawa zangaphandle ke emelelwa izibambo main nasizayo ukuthi lokuhlanganiswe nawo izindlu. Futhi, Bosch kudivayisi perforating has nesikulufu ukuphepha, okuvumela ukuba enze imishini kanye nemingcele ezidingekayo kusukela ithuluzi kungakhathaliseki ukulawula izinga ngumsebenzisi. Isici design ukuthi kungenzeka kwesicelo lula Imibhobho esemzimbeni ehlukene. Ngenxa SDS Plus uhlelo, opharetha angasebenzisa chuck keyless, okungukuthi, kungenzeka ukusebenza nezinamathiselo, ekungafanele kube iyahambisana chuck SDS. Le isixazululo kakhulu kwandisa ukusebenza isibhamu, esinciphisa isidingo nginazo imodeli nabanye kwemigomo izakhi ukusebenza.
Imodeli has a amandla kunalokho okusezingeni eliphezulu nomthelela ngesikhathi esifanayo ungagcina elikhulu imishini izinga isikhathi eside. Lokhu kahle inikeza ukugcwaliswa lobuchwepheshe, okuyinto has a perforator Bosch GBH 2-26 DFR Professional e ukucushwa eziyisisekelo. Ngakho, izimfanelo imodeli zimi kanje:
Amandla - 220V.
amandla ukusetshenziswa izinga - 800 Watts.
Imivimbo - abangafika kwabangu-4000 rev / imiz ..
Isibalo ngesivinini ukusebenza - kuze kufinyelele 900 rev / imiz.
Inombolo yokusebenza izindlela - 3.
Torque izinkomba iphezulu - 28 Nm.
Umthelela Abazama - 3 J.
I ububanzi esiphezulu e ukucutshungulwa steel - 1.3 cm.
I ububanzi esiphezulu processing ukhonkolo - 2.6 cm.
I ububanzi esiphezulu ngokhuni ukucutshungulwa - 3 cm.
umqhele ububanzi - 6.8 cm.
Ithuluzi Ubukhulu - 40,7x21 cm.
Ikhebula Ubude - 350 cm.
amandla Mass - 2.7 kg.
izici kwezobuchwepheshe isibhamu
ubuchwepheshe Kwasetshenziswa aim at ekuthuthukiseni ithuluzi ngezindlela eziningana. Ngakho, for the lula opharetha inikeza isango owengeziwe. Ngalo, umsebenzisi anganikeza umsebenzi olunembile ngaphandle kokuthola ukhathele isikhathi eside. isibambo Asizayo isetshenziswa ngobuningi kanye nezinye abakhiqizi, kodwa perforator Bosch GBH 2-26 DFR Professional kulekelelwa kudivayisi nge isango esithambile futhi rotatable e noma isiqondiso. ukunemba kwawo kanye ikhuthaza ukuba khona limiter e ithuluzi. Le divayisi ikuvumela ukuthi ukhethe ukujula ukudala imbobo okufanayo nemingcele ebekiwe. Umsebenzisi ungaba futhi ulungise inombolo linemibhikisho. Lokhu umsebenzi ilawulwa stepless ukulungiswa ngokushintsha amandla asetshenziswa i-inkinobho.
Umhlangano kanye ukulungiswa of Punch
Sebenzisa kuphela ithuluzi Kunconywa ukusingatha ngaphezulu. Ukuze ukufakwa kwalo kumelwe akusebenzise knob ohlangothini oyifunayo lize ikhiye. Isikhundla efanele strapping yayo itheyiphu kufanele ibe slot ekhethekile izindlu. Okulandelayo, kufanele ulungiselele ukujula imishini. Ukuze lokhu kulungiselelwa, sebenzisa idilimitha esifanele, anemisila Bosch izando yokunyathelisa. Ukufundiswa ubonisa ukuthi kokufaka ribbed kudivayisi izivimbelo kufanele iqondiswe phezulu. Khona-ke, stop sifakwe SDS-plus chuck. Kubalulekile kakhulu ukuthi afakwe kahle, njengoba ukufuduka kancane kuzoholela ukusebenza ayilungile. Limiter kumele wadonsa ukuze igebe oluhambisana kuvalwe ukujula sokuprakthiza isethi.
Into yokuqala ufuna ukufaka ku umnikazi we ishizolo kwesokudla, okuyinto ingalungiswa eendaweni ezihlukahlukeneko. Ngokulandelayo, imodi wokusebenza. Ngaphambi ukusebenzisa, hlola isimo cap zokuzivikela. Iyatholakala kubasebenzisi izingxenye ezisele for Bosch isando rotary futhi zihlanganisa lesi sici, ngakho uma udinga ukubuyekeza ngeke kuphakama izinkinga zayo. Uma uhlela ukuba zisebenze nalawo kwehlukana, kubalulekile ukusetha okuyiyona ukuzungeza element yokusebenza. Kufanele futhi cabangela ukubeka izingcezu. Sebenzisa izingcezu ngokushayela kuphela kancane umnikazi ekhethekile enikezwe ukulungisa shank SDS-plus. Ngaphambi ufake lento lokubikezela yayo isiphetho okufanele kahle agcotshisiwe futhi bahlanza. Idivayisi ifakwe kuze kube ngomzuzu lapho kwenzeka ukufakelwa.
ukusebenza qualitative okuphephile ithuluzi izotholakala kuphela uma okuqukethwe eshisayo elizungezile kuhlanzekile. Ukuze afeze izinyathelo zokuvimbela disassembles isibhamu Bosch, esinikela zokwehlukanisa zonke izakhi uqhuba futhi isibambo ezengeziwe. Zonke evele of izingxenye ukuba zihlanzwe, kodwa ngaphandle kokusebenzisa eqinile chemical izixazululo futhi Abrasives indawo. Igobolondo kufanele ahlanze emva konke ukusetshenziswa ithuluzi.
Akuzona zonke izinkinga zingaxazululeka kwayona. Njengomthetho, ukulungisa ezimele kuhilela kuphela esikhundleni lamaseli ezilimele ukuthi kukhona amenable ukuba ukuqaqa ekhaya. Umenzi German ethunywe izimpahla onga izingxenye amakhasimende ayo Bosch isando yokunyathelisa. Ukuze oda, kumele ukuhlonza inombolo okuyingxenye bese eyithumela lona i isikhungo ogunyaziwe.
Abanikazi bathi umshini izinga inhlangano, nokwenza kwayo okusezingeni eliphezulu kanye lula ukusetshenziswa. amandla High nge amandla umthelela 3 J. ivumela ukuthi iphathe nzima kakhulu ukucubungula izinto - Practice ebonisa ukuthi sokuprakthiza Bosch GBH 2-26 DFR Professional kahle sokuprakthiza nokhonkolo nensimbi. Into esemqoka - ukusebenzisa amasethingi afanele. Singasho ukuthi ukusebenza ihlukile njalo Punch in ingxenye imifanekiso okhokhelwayo. Nokho, esimweni abasebenzisi ithuluzi German ukugqamisa nokusebenza okubanzi, ephelele Ergonomics.
Izibuyekezo ezingezinhle mayelana imodeli
imibono engakhi ubheke isisindo kanye nezindleko ngesibhamu. Noma kunjalo, ehloniphekile amandla ezingaba ayikwazanga waqaphela ngaphandle idivayisi sisindvo. Nokho, ukuba khona i isibambo eyengeziwe, njengoba okuhlangenwe nakho abanikazi isinxephezeliso isisindo. Ngokuya izindleko idivayisi uyisibonelo esiphakeme futhi ephansi-level, kanye nozakwabo engabizi lobuchwepheshe nezinye abakhiqizi. Kulokhu, umthelela izinga okusezingeni futhi waba nokwethenjelwa, esesikhundleni Bosch puncher. Intengo kuhluka 8 kuya kwezingu-10. Hlikihla. Uma kuqhathaniswa, uhlobo kancane odumile ukunikela ongakhetha afanayo ayizinkulungwane 6-7 Nakuba lesi sifaniso egcwele imikhiqizo yabo kanye Punch German aphume umbuzo ..
ukwakhiwa amathuluzi amandla makethe uvalwe egcwele onobuhle izingxenye ezahlukene. Njengomthetho, kunoma iyiphi idivayisi ungathola okufana efanayo imikhiqizo ukuncintisana. Nokho, isibonelo inkampani German inezici eziningana ukuthi ukuhlukanisa ke, ngisho isigaba kwamathuluzi professional eziphambili. Inzuzo main kuyinto igobolondo ngokuba perforator Bosch, ezisabalele amakhono opharetha ngokuya ukukhethwa amathiphu efanelekayo. Oluhambisana amandla okusezingeni eliphezulu ukubeka izindlela kwenza ukusebenza kahle futhi ithele Punch. Ungathola izinga okusezingeni Drilling kunoma iyiphi impahla. Ngaphezu kwalokho, Bosch onjiniyela wenza isinyathelo esibalulekile ngokuya inqubo ezishintshayo. Engingakusho nje ukuthi amadivayisi ukulungiswa kanye umsebenzisi iziqondiso ukuqeda kuhlolwa endaweni yokusebenza.
Indlela yokusebenzisa i-micrometer ukukala izingxenye ezincane
Isicelo kanye nesihloko 'Winter' nezinye izindaba nezingane zabo bonke ubudala
Umlingisikazi Enn Heteuey: Filmography, izindima umhlabeleli
Ukusebenza kaHitler lokuqala lezempi - Anschluss
Ukuyiswa edolobheni kuqede Reconquista? Ukuphela Reconquista. Reconquista, kafushane
Nati Pine - inqolobane izakhi
Ukusetshenziswa amabhodlela epulasitiki kuleli zwe: izihloko ewusizo kanye imihlobiso
Winter anyanisi: zokutshala nokunakekela. Nini futhi kanjani ukuze batshale anyanisi ebusika. Ubuchwepheshe okhulayo anyanisi ebusika
Unkulunkulukazi u-Athena, indodakazi kaZeyusi Metis